मेरो, कोरियाको कृर्षी अनुभव – Korea Pati
मेरो, कोरियाको कृर्षी अनुभव
September 3, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on मेरो, कोरियाको कृर्षी अनुभव
ध्रुव कुमार श्रेष्ठ ।
हेलम्बुको डाडाँकाडाँ हुर्किएर यहाँको खेतबारिमा गरेको गुजारामुखि कृषि प्रणाली देखेको र भोगेको म, एउटा सम्पन्न मुलुकको कृषि प्रणालीलाइ नजिक बाट सन २०१४ मार्च ६ मा इ पि एस कोरिया मार्फत कामदारको रुपमा कोरिया प्रबेश गरेपछि सुरु भयो मेरो अधुनिक कृषि प्रणालिसंग जोडिएको विकसित मुलुक कोरियामा कृषि कर्म ।
सुरुमा कोरियाको राजधानी सउलबाट रहेको योङ्मुनमा रहेको एउटा कृषी फर्ममा काम बिदेशि कामदारको रुपमा सुरुभयो मेरो कोरियाको काम । सुरुमा भाषिक समस्याले काम गर्न गाह्रो भएपनि बिस्तारै काम सहज हुदै थियो । मैले काम गर्ने कम्पनिले तरकारी जन्य पदर्थ आधुनिक प्रणालीबाट उत्पादन गर्दै आफ्न्नै समुहको बिक्री केन्द्रबाट बितरण गर्ने गथ्र्यो ।
नेपालमा लगातार धेरै काम गरेको अनुभव नभएको म, दिनमा १२ घन्टा भन्द बढी निरन्तर काम गर्दा साह्रे गाह्रो हुन्थ्यो । दिन भरि गोल्भेडा, काक्रो, स्ट्रोबरि र बिभिन्न प्रजातिका सागहरु टिप्ने,लगाउने र गोड्मेल गर्दै बेलुका तेहि सामानहरुलाइ प्याकिङ गरे बजार पठाए पछि सकिन्थ्यो दैनिक रुटिङ ।
त्यहि रुटिङ १ बर्ष सम्म चल्यो । त्यसपछि १ महिना च्याउ कम्पनिमा काम गरें । त्यो कम्पनिमा राम्रो काम नचलेपछि बंगुरपालन कम्पनि प्राबिधिक सहयोगि(फार्मको मर्मत गर्ने डिपार्ट)मा काम गर्नथाले । त्यो बेलासम्म भाषाराम्रो सुधार भैसकेको र हप्ता ५ दिन काम र २ दिन बिदा हुदाँ बिदाको समय कम्पनि नजिकैको अरु फार्ममा आराबाइट(पार्ट टाइम) गर्दै बिभिन्न काम सिक्ने र कोरियाको कृषीलाइ नजिक बाट हेर्ने मौका मिल्यो ।
एकदिन साहु आएर १ हप्तापछि आइतबार १ बजे ठुलो पानी सहित हावाहुरि पर्न भएकोले सबैजान त्यो दिन बिदा नबस्न आग्रह गरे । एक हप्ता पछि उनले भनेको जस्तै भयो । मलाइ अचम्म लग्यो कसरि थाहा भयो भनेर । मैले बुझ्दा कोरियाम मौसमको जानकारी धेरै समय आगडिबाट आफ्नो मोबाइलमा हेरेर त्यो अनुसारको विभिन्न योजनाहरु बनाउने रहेछन । यता नेपालमा रेडियोले पानी पर्ने सम्भावना रहेको समाचारमा सुनेर काम गर्नु पर्छ । त्यो पनि मिल्दैन एकै दिनको पुर्बाअनुमान पनि ।
विकसित भएर पनि मासु , दुग्धपदार्थ , फलफुल, बिभिन्न तरकारि र धेरै कुरामा आत्मनिर्भर पनि छ । कृषि मन्त्रालय र मंन्त्रीको चयन र यसले समेटिन फराकिलो दायराले कृषिलाई धेरै महत्व दिएको कुरा अनुभव गर्न सकिन्छ ।कृषिजन्य वस्तुहरू जस्तै मासु,अण्डा र दुग्धपदार्थको उत्पादन,प्रशोधन र वितरणमा अध्ययन अनुसन्धान, वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग, प्रयोग हुने मलखाद, किटनाÞशक रासायनिक औषधि, पशुपंक्षीको स्वास्थ्य ,चरन र खानाको गुणस्तर, जनस्वास्थ, वातावरणमा पर्नसक्ने दीर्घकालीन प्रभाव र एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा मितव्ययिता, स्थिर बजारमूल्य, माग र आपूर्तिको सन्तुलन जस्ता कुराहरूको व्यवहारिकतालाई स्पष्ट नितिनियम भएको राष्ट्र रुपमा देख्न सकिन्छ कोरियालाई ।
हरेक काम पुर्ण रुपमा आधुनिक तरिकाले गर्ने र प्राबिधिक मुल्यांकन बिनाकुनै पनि काम सुरु नगर्ने कोरिया आज थोरैमात्र कृषी योग्य र प्रतिकुल बाताबरणको बिचमा पनि धेरै कृषिजन्य उत्पादनमा अगाडि र आत्मानिर्भर रहेको छ ।तर नेपाल कृषि उत्पादनमा कमी आएका तथ्याङ्क सहितका समाचारहरू आउछन । चामल उद्योगहरू भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएका,खाद्यान्न अभाव,प्लास्टिकका चामल,फलफुल तरकारीको आयात र चिया,जुट,मकै,उखु, सुर्ती, जडीबुटी जस्ता सम्भावना भएका व्यवसाय र उद्योगहरू फष्टाउन नसकेका यस्तै यस्तै समाचारहरू ।
देशलाई जे चिजको बढी आवश्यकता छ । जे को सम्भावना छ । त्यसैमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो । दीर्घकालीन, अल्पकालीन नीति र योजना बन्नुपर्ने हो । कृषिमा क्रान्ति नै हुनुपर्ने हो, तर भएन । प्रधानमन्त्रिहरु किसानकै छोरा होलान् । नीतिनिर्माताहरु, सभासद्, नेता मंन्त्री र सचिवहरू गाउँबाटै आएका होलान् । कसैले यसबारेमा केही नसोचेको,केही नगरेको यथार्थले देखाउँछ । गर्न नसक्ने ठुला कुरा गर्नुभन्दा प्रत्येक गाँउमा एउटा कृषि सेवाकेन्द्र, सिंचाई कुलो, प्रत्येक गाउँपालिकामा नहर भनेको भए हुन्थ्यो । स्मार्ट सिटी भन्दा स्मार्ट कृषिको नारा अघि सारेको भए हुन्थ्यो । कृषिमा सहकारिता र कृषि बैकिङ्ग प्रणाली व्यापक र सहज बनाइनु पर्ने हो ।
मनसुनी वर्षामा कमिहुने क्रम बढिरहेको छ । यो बर्ष अत्याधिक बर्षा भयो । सम्बन्धित निकायले पूर्वानुमान गर्दो हो, सरकारलाई जानकारी दिँदो हो । कृषि विज्ञहरूले सुझाव सल्लाह दिँदा हुन । कृषि मन्त्रालय र योजना आयोगले नीति योजनाहरू बनाउँदा हुन तर किन यस्तो ? कार्यान्वयन किन नभएको ? किन सबै युवाहरू बिदेशिनु परेको सुन फल्ने खेत त्यागेर बालुवामा पसिना बगाउन ? कतिन्जेल चल्छ रेमिटेन्सको पैसाले कुहिएको चामल र दुषित तरकारी किनेर ? कतिन्जेल पानी पर्ला र खेत रोपाई गरौला भनेर आकाशतिर हेरेर बस्ने किसानहरू.? पर्यटन र सिंचाईका सम्भावना कहिले फुल फेजमा चलेर देशको अर्थतन्त्रले राहत पाउला ? कतिन्जेल बसिरहने यस्तो गुजारामुखि संस्कार पालेर? अझै कति पुस्ताले यस्तै चिन्ता गरिरहनु पर्ने हो ?
अरू ठुला ठुला कुरा गर्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण पेसा देशकै मेरुदण्ड भनिएको कृषिको बारेमा सबैले बोल्नु, चिन्तन मनन र सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । कृषि पेसामा अनुसन्धान,आधुनिकीकरण,विविधिकरण र व्यवसायीकरण गर्नु समयको माग हो । प्रत्येक वडामा कृषि तालिम र सहयोगका परियोजनाहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्र र व्यक्तिगत प्रयासले मात्र कृषि क्षेत्रले आशातित फड्को मार्नसक्दैन । एकीकृत प्रयास र मुख्यतया सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरु लागी पर्न जरुरी छ । कुनै अमेरिकीले नेपाल सम्भावना र अवसर भएको कृषिप्रधान देश हो भनेर बुझ्छ र महसुस गर्छ तर हामीमा यो चेतना किन नआएको हाल सम्म ?
लेखक श्रेष्ठ (२०१४ देखी १०१९)सम्म कोरियामा वसेका थिए ।जनतापत्रबाट
दक्षिण कोरियामा २० बर्षिय नेपाली यूवतीलाई कोरोना सङ्क्रमण पुस्टी!
कोरियामा आँधीमा परेर २ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ लाख भन्दा बढी घरहरुमा बिद्युत आपुर्ती बन्द भएको छ ।
कोरियामा आज निर्वाचन, काेराेना सङ्क्रमितलाई पनि मतदानको व्यवस्था
April 15, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने
कोरियामा गर्मीको सकस,कैयौँको मृत्यु,हजारौं पशुपन्छी समेत मरे:
August 8, 2019 गुरुदत्त न्यौपाने
June 30, 2020 June 30, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने
कोरिया जान चाहनेको लागी कोरियाली मन्त्रालयको अत्यन्तै जरूरी सुचना!
August 4, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
संसदिय समितिले ईपिएस पास गरेका यूवाहरुलाई कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दियो !
August 1, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
दक्षिण कोरिया श्रमिक पठाउन कार्यविधि संशोधन गर्ने सरकारको तयारी
July 30, 2021 July 30, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
काकाओ कम्पनीका मालिक बने कोरियाकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति !
@copyright Sulavkhabar Media Pvt. Ltd.	| Theme: News Portal by Mystery Themes.